नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाली पत्रकार किशोर पन्थीलाई अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट मानार्थ पीएचडीबाट सम्मान
नेपाली पत्रकार किशोर पन्थीलाई अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट मानार्थ पीएचडीबाट सम्मान
नेपाल मदर पत्रकार किशोर पन्थीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ !
पत्रकारितामार्फत मानवताका क्षेत्रमा असाधारण सेवा गरेवापत न्युयोर्क निवासी पत्रकार किशोर पन्थीलाई अमेरिकाको विश्वविद्यालयले मानार्थ पीएचडी अर्थात् डाक्टर अफ फिलोसोफीबाट सम्मान गरेको छ । अमेरिकाको सिका युनिभर्सिटीले पत्रकार पन्थीलाई ह्युमेन लेटर्समा मानार्थ पीएचडीबाट सम्मान गरेको हो ।
मानवताको भलाईमा योगदान दिएका कारण पन्थीलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको युनिभर्सिटीकी प्रेसिडेण्ट श्यारोन जे बाक्वेडो फिनले जानकारी दिएकी छिन् । जनवरी २२ मा भर्चुअल रुपमा ग्रयाजुएसन कार्यक्रम गरिएको छ, जसमा दर्जनौंको उपस्थिति रहेको थियो । कोरोनाको महामारीका कारण भर्चुअल रूपमा कार्यक्रम गर्नुपरेको युनिभर्सिटीले जनाएको छ ।
ग्रयाजुएस सेरेमोनीमा डा. श्यारोन फिनले पत्रकार पन्थीलाई मानार्थ पीएचडी प्रदान गर्नुको औचित्यबारे बोलेकी थिइन् । साथै पन्थीको बायोग्राफ़ी छोटकरीमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
पत्रकार पन्थी न्युयोर्कबाट ११ बर्षदेखि प्रकाशित हुदै आएको खसोखासका प्रधानसम्पादक हुन् भने झण्डै २ दशकदेखि पत्रकारितामा सकृय रहदै आएका छन् । अमेरिकामा एकदशकभन्दा लामो समय पूर्णकालिन पत्रकारितामा सकृय पत्रकार पन्थीले अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । पत्रकार पन्थी अमेरिकी अध्यागमन, राजनीति र सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
सिका युनिभर्सिटीबाट पैगम्बर शेफर्ड बुशिरी लगायतका चर्चित व्यक्तित्वहरु समेत मानार्थ पीएचडीबाट सम्मानित भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकाका केही सांसदहरुले समेत सिका युनिभर्सिटीबाट मानार्थ पीएडी प्राप्त गरेका छन् ।